Firefox / Chrome: sida loo suurtageliyo hubinta higaadda ee Isbaanishka. Laga soo bilaabo Linux
Firefox / Chrome: sida loo suurtageliyo hubinta higaadda ee Isbaanishka
Doorkeyga sharafta leh ee dhexdhexaadiyaha ka ah balooggan (iyo xitaa kahor, In Aan Isticmaalno Linux) waan arkay khaladaadka qorista naxdinta, labadaba qorista maqaallada iyo faallooyinka, oo aniga igu wareeray. Dareenkan, waxaan u maleynayaa in khiyaanadan ay waxtar weyn u yeelan karto hagaajinta amarkayaga luqadda. Xaqiiqda qallafsan ayaa ah in aanaan aqoon sida loogu dhawaaqo nafteena si sax ah afkeena taas oo keeneysa qasaaro
2 Ku jira Chromium / Chrome
3 Yapa: khaladaadka ugu badan
Sida caadiga ah, Firefox waxaa loo qaabeeyey inuu si otomaatig ah u hubiyo higaadda. Waxaad awood u yeelan kartaa ama aad gab kartaa muuqaalkan adoo tagaya Doorbidyada> Sare> Guud. Markaad halkaas tagto, xulo ikhtiyaarka Hubi higaadda sida aad u qoreyso.
Sida loo suurtogeliyo hubinta higaada ee Firefox
Kadib, waa inaad midig-u-riixdaa sanduuqa qoraalka ee aad wax ku qoreyso oo aad awood u siisaa ikhtiyaarka higaadda Hubi (haddii ay dhacdo in aan la awoodin). Ugu dambeyntiina, mar labaad midig guji sanduuqa qoraalka oo xulo luqadda u dhiganta.
Higaada Hubinta Luqadaha Hubinta ee Firefox
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan buugaagta caawinta ee Mozilla.
Ku jira Chromium / Chrome
1. Dhagsii badhanka Chrome, oo ka muuqda bar-tilmaameedka biraawsarka.
2. Dooro Dejinta> Tus xulashooyinka horumarsan.
3. Qeybta luqadood, dhagsii Luqadaha iyo dejinta qoraalka.
4. Sanduuqa wadahadalka luqadood, xulo sanduuqa hubinta Daar dib-u-habeynta qoraalka si aad u damiso ama u darto hubiyaha higaada.
5. Haddii aad rabto inaad isticmaasho hubinta higaadda, ka xulo luuqadda ku habboon liiska oo guji U adeegso luqaddan hubinta higgaadinta midigta. Haddii luqadda aan lagu darin, ku dar mid ka mid ah "luqadaha aad doorbideyso". Waxaa jirta suurtagalnimada in luqadda aad kudareyso uusan laheyn qaamuus higaada-higaada. Xaaladdaas, ma awoodi doontid inaad ku adeegsato hubinta higaadda ee luuqaddaas.
Ku Higaadi ikhtiyaaraadka Kala-baxa ee Chromium
Tilmaam gunno ah: haddii aad u isticmaasho webka luqado kala duwan, waxaad si fudud u beddeli kartaa luqadda qaamuuska markaad qorto. Kaliya hubso in luuqadahani ay kujiraan liiska luuqadaha la doorbido ee kujira wadahadalka dejimaha ee Idioma. Kadib midig u guji sanduuqa qoraalka meesha aad wax ku qoratay oo xulo Higaada xulashooyinka hubiyaha iyo luqada aad doorbideyso.
Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaan kugula talinayaa inaad aqriso buugaagta caawinta ee Google.
Yapa: khaladaadka ugu badan
1. Waxay leedahay excelente (oo leh "xc"), maya exelente.
2. Haya, halkaas y hel.
Haya (ka soo falka falka): sidaa darteed xiniin itimaalka, waa inaad waxbarto.
Halkaas (meel): intaas waa ka sii badan tahay halkaas shaki kasta
Halla (hel): Adiga hel Halkan
3. Waxay leedahay socda (oo leh "iyo"), ma soconeyso.
4. Vaya y deedka.
Tag (ka socota falka go): si aan soco ilaa iskuulka waxay u baahan tahay roob
Valla (kan aad booddo): shalay waxaan orday 100 m. leh dayrarka.
5. Tube y Wuxuu lahaa.
Hadday (ka timid falka): Wuxuu lahaa busbus digaag
Tubbo (weel): tuubbo iftiinka uu ka gubtay
6. Qofka labaad oo aan dhammaystirnayn
Codkaaga ayaa yiri, waad dheeshay, ma baxdey. Maad oran, waad dheeshay, waad baxday
7. Sababta - maxaa yeelay,
Sababta (su'aalaha):Sababta ma waxaan nahay Linux? Ma aqaano, cidna si fiican uma yaqaan sababta.
Sababta oo ah (sharaxaad): Waxaan nahay sidan maxaa yeelay, ma noqon karno si kale.
8. Dhameeyay - codso
La dhammeeyey (falka in la sameeyo): waa sameeyey.
Echo (laga bilaabo falka in la tuuro, waxaa loola jeedaa in la tuuro): meesha codso Qashinka?
9. Weyn y Basta
Weyn (macnaheedu waa "weyn"): waa gobol aad u weyn ballaaran.
Ku filan (macnaheedu waa "mar dambe"): ¡Basta laga bilaabo khaladaadka higgaadinta!
10. Qeybtii ugu dambeysay ee shaqallada ayaa nalakula dhexgalay.
Waa qalad in la isticmaalo "aynu is ixtiraamno" ama "aan is ixtiraamno", waxa saxda ah ee la leeyahay waa "aan is ixtiraamno".
Sikastaba, ragga, marwooyin: idin weydiisan maayo inaad noqotaan Cervantes, xitaa ma noqoneysaan kuwa aasaasi u ah lahjadaha ama koomayaasha, laakiin, sida saaxiibkaa u dhihi lahaa, "gabal dhaqameed!"
Sikastaba, waad ka tagi kartaa faallooyinkaaga, puteadas iyo aragtidaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Firefox / Chrome: sida loo suurtageliyo hubinta higaadda ee Isbaanishka
90 faallooyin, ka tag taada
́Ǵǵǵ́ŕá́áázzííaasśś x́ t́ú v́ué́n̨a bolúńtá
Cr30 qu3 n0 func10n4 aad b13n p4r4 4qu3ll0s qu3 l3s gus74n 3scr1b1r 3n h4x0r.
jiir bilaa dab ah dijo
Hadday youtube dhigayaan, dhagsii meelkasta oo geli «1337» dhammaan c0m3n74r10z s3 3zcr183n like this
Kajawaab jiirka bilaa dabada
ray I qke kqeria qor aszi
Taasi waa sababta oo ah waxaan tijaabineynaa hubiyaha higaadda Firefox si aan u aragno sida ay waxtar u tahay. Waxa ka maqan is-sixid. 🙂
Higaadda wanaagsan waa hagaagsan tahay, sidaa darteed si fiican ayaannu isu fahmaynaa.
Sidoo kale waa muhiim in lala tashado qaamuuska, maadaama gurigeena aan ka baranay inaan macno siino erayada, laakiin reer kale, ama magaalo kale isla ereygaas ayaa si kale loogu fahmi karaa. Taasi waa halka qaamuusku naga caawinayo: waa halbeegga in la raaco si aan dhammaanteen u wada fahanno dhib la'aan, waxaan ku soo wada kornay meel kasta, maxaa yeelay fahamka iyo wadahadalku waxay ka bilaabmaan macnaha aan ereyada siino.
Waa run ... qaamuusku waa saaxiibbo weyn.
Sidoo kale, waxay ila muuqataa inay ansax tahay inaan muujiyo naftayda iyadoo la raacayo isticmaalka iyo caadooyinka waddan kasta. Waan ogahay inay dhibayso qaar ka mid ah "Waxaan wax u qoraa sida qof reer Argentine ah." Nasiib darrose, ma beddeli doono sida aan ahay. Waxaan iska celiyaa "Isbaanish dhexdhexaad ah" (haddii taasi runti jirto).
Dabcan nin, qof kasta oo u muujiya siduu rabo intuu is fahmayo 🙂 Anigu waxaan ahay Andalusian waxna iskama beddelo, taasi waa sida aan jeclahay inaan is muujiyo 😛
Cashar naxwaha aad u wanaagsan 😉 in kastoo sababta - maxaa yeelay, iwm. macno badan buu leeyahay:
Waa run. Sida aan ugu sharraxayo faallo kale, ma ahayn fikradda in la bixiyo "cashar naxwaha" laakiin in la bixiyo talooyin kooban oo maskaxda lagu hayo.
Af-qaladkii ugu horreeyay ee aad ku sameyso maqaal kasta oo aad daabacdo, waxaan noqon doonaa kan ugu horreeya ee kula socodsiiya.
Muxuu faaladani ku saabsan yahay? Uma arko dhibaatada ay leedahay maqaalka.
Waxaa jira dad leh hingaad heer sare ah oo aan si weyn ugu tiirsanayn baarayaal sixir (si aan runta u sheegno, iyaga aad bey u dhibtaa isticmaalkeeda).
Dhanka kale, waxaa jira dad dulqaad badan oo aan isku mashquulin inay arkaan haddii higgaadintoodu sax tahay ama khalad tahay.
Labadaba Firefox iyo Iceweasel waxaan leeyahay hubayaasha higaada oo lagu habeeyay Isbaanish. Sidaas darteed, waxay u adeegi kartaa inay awood u yeelato inay wax si fiican u qorto oo aysan u gelin koorso khadka tooska ah ku saabsan sida loo kala saaro "Hoygan" koodh lagu qasay "h4x0r" oo ku yaal Facebook.
Haddii aad rabto inaad noola dhaqanto sidii jaahil, sharraxaadda sababta ay ahayd mid aan dhammaystirnayn, sida aad u aragto "sababta" looma isticmaali karo su'aasha keliya. Markii aan sheegay in ay muhiim tahay in taxaddar dheeraad ah laga yeesho higaadda, way ku filnayd.
Welina ma fahmin sababta aad u dareemaysid in laguu tilmaamo. 😉
Waa salaaman tahay Elav, maxaa yeelay dhammaanteen qaladaad higgaadinta ah ayaynu wada galnay (xitaa adigu goor dhawayd oo aad qalad ku qortay qalad z) macnaheedu maahan in koorso higgaad yar lagu tuuray wejiyadayada. Waa xoogaa ka sii taxaddar badan marka wax la qorayo.
Runtii maahan in cashar la siiyo qof walba. Waxay ila muuqatay inay waxtar wanaagsan noqon karto in laga fogaado khaladaadka badan ee mustaqbalka dhaca. Tani waa wax aan naftayda u isticmaalay inaan ku horumariyo xirfadahayga luqadeed.
Dhanka kale, waxaan u maleynayaa inaad igu raaci doontid in kuwani aysan ahayn "qaladaad yar yar" higgaad ah oo ay sameeyeen "feejignaan la'aan." Xaqiiqdii, qofna lagama dhaafayo inuu qalad sameeyo waqti ka waqti, laakiin markii FARSAMADAN (qaar badan oo ka mid ah ay yihiin dugsi hoose) si isdaba joog ah loogu celiyo, waxay ka hadlaan wax aad u daran.
Si buuxda aan kuugula hadlo, waxay ila tahay aniga in sameynta "dhaqan" ama "waxbarasho" ay ka muhiimsan tahay faafitaanka Linux iyo barnaamijyada bilaashka ah (xitaa sida ay muhiimka u tahay tan).
Tani waa sida aan dareemayo. Waxaan rajaynayaa inaanan ku xumayn ama aan cid ku xumayn.
Ujeedada maqaalka waa mid aad ufiican, laakiin waxaan ku adkeysanayaa inaad yeelato xarrago iyo xeelad badan oo aad wax ku dhahdo, maxaa intaas dheer, waxaad aad u hubtay in maqaalkaagu uu abuuri doono khilaaf maadaama xukunki kuugu dambeeyay aad ku xustay erayga 'bitch'.
Abuur maxaa?! Mudane Linux, fadlan, Pablo aniga ma ahan, waan hubaa taas.
Illaah baan ku dhaartaye, mudane ku filan, waa talo fudud in la isticmaalo saxe, iyo faallo shaqsi ah ...
Marabtaa inaad taabato ...
Olol muuqda. Waan maqanahay…
Ma garanaysid sida hoos u dhigiddu ay tahay inaad naftaada disho qormo maqaal oo loogu yeero "heer sare, waxtar weyn!"
Sidaa awgeed xanaaqayga.
Ama ka hortag, im in! xD
MA ahan wax ku saabsan cashar bixinta, laakiin waa barashada, ku saabsan ka faa iideysiga wanaagsan kombiyuutarada aan ku leenahay guriga ama guriga.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, miyaad dareentay argagaxa gooldhalinta ee aad haysato? Waxaan u maleynayaa in casharradan yar ay sidoo kale kuu shaqeyn karaan.
Semicolon kasta wuxuu ku yaalaa meeshiisa.
Ma aqaan halkaad ka hesho taas oo aan ula dhaqmay sidii jaahil. Haddii aad u qaadato wax iska fudud, taasi waa dhibaatadaada, ma ahan tayda.
Dhinaca kale, waxaan ku darsanayaa tabaruc wax dhisid ah si aan dhammaanteen (fiiro gaar ah u leenahay) aan fiiro gaar ah u yeelano markaan qorayo (Aniga ayaa ku jira). Taasi waa waxa qaybta maqaalka ee ka hadlaysa sida loo suurtogaliyo hubinta higaada ee Firefox / Chromium ay ku saabsan tahay.
Uma jeedin inaan qoro maqaal dhammaystiran oo ku saabsan xeerarka higgaadinta, laakiin inaan talo guud ka bixiyo ereyada aan arkay ee guud ahaan dhibaatooyinka keena.
Waad salaaman tahay, Mr. Linux. Ci aad u badan kisaz ezkrivaz komo laz yamaz. A yama komo llo
«Waad awood u yeelan kartaa ama shaqeyn kartaa»
Waa wax laga xumaado inaadan adeegsan shaqadan sax?
Ma fahmin. Miyaad ka sii faahfaahin kartaa? Mahadsanid.
Ma awooddaa waan ka xumahay, luqadee ayuu ku jiraa? gaucho? LOL.
Bal u fiirso kani inuu yahay blog-dheer, marka ugu yaraan baro inaad isku qaldo ficillada, sax? maaddaama aynaan dhammaanteen ku faraxsanayn habka hadalka ee reer Argentine, in kasta oo ay ku gabanayaan fikradda ah inay tahay wax soo jireen ah, salaan.
Waxay ugu wacan tahay ifafaalaha Voseo, oo aan sax ahayn maadaama ay tahay beddelidda magac u yaalka iyo shaqalka Isbaanishka
Gabagabadii wuxuu wax u qorayaa qaab sax ah
Waa salaaman tahay Cocolio!
Waan ku faraxsanahay inaan ogaado in qoraalkani ujeedo laga lahaa.
"Voseo" waxay aqbashay RAE inuu yahay mid gabi ahaanba ansax ah oo sax ah.
Ma aragtay sida ay ufiican tahay in wax cusub la barto?
Adduunku kuma eka Spain.
In kasta oo ereyga vos uu yahay mid ka soo jeeda ereyga 'vocé' oo asal ahaan ka soo jeeda Boortaqiis.
voçe, lahjad la'aan iyo kedar
Waxay isuguxirantahay sidan:
Adiga / adigu waad socotaa -s
Isaga / iyadu way socdaan
Waad socotaa -waxaad / socotaa -s
Ficil ah isku-xirnaanta labaad ee ku dhammaata -er isbeddelka isku-xidhka:
Halkan Uruguay kuma isticmaalno kuwaaga. Waxaan u adeegsanaa "adiga" oo seddexaad wadajirka jamac ayaa loo isticmaalaa.
Fasalka ayaan idinkaga tagayaa, laakiin taasi waa doqonnimada faalladaada ...
Ma wax xun baa in qof qoro markuu hadlayo? Oo waxaan ula jeedaa lahjadaha calaamadaha lahjadda reer Argentine, oo si rasmi ah looga aqoonsan yahay gudaha luuqadda Isbaanishka, in aadan jeclayn arrin yar, ujeeddadaada keliya, markasta oo aad faallo ka dhiibato, waa inaad ka soo horjeedsato.
Ahh, sidaad jeceshahay, shaqsiyan tan voseo iyo lunfardo waxay ila egtahay aniga sifiican, si fiican uuga bixi maayo tafaasiil si aan u abuuro khilaaf, marka la soo koobo, mid walba sheekadiisa, mana aha inay ka soo horjeeddo, ok? salaan.
waxay kuugu muuqan karaan waxaad rabto
laakiin waa qaabab Isbaanish ah oo sax ah
Waxaad ku xun tahay cocolito habka ay magaca naadir ah u aqbasho inuu qalad yahay tanna meelna kama aad gaadho. Had iyo jeer raadinaya timaha ukunta in mania lab.
Waxay ila tahay aniga post wanaagsan waa wax faa iido leh
Si kastaba ha noqotee, mar hore ayaan abuuraa muran (si ula kac ah uma aha) tanina waxay ila tahay aniga ujeedka maqaalka, feker ahaanteyda waa kaliya maqaal naga caawin doona higgaadintayada, oo innaga dhammaanteen u wanaagsan
"Xullo" oo sida @Cocolio uu ku leeyahay "waad awoodaa" ma aha habka lagu hagaajiyo falalka, ugu yaraan halkan Isbaanishka sidaas looma isticmaalo. Argentina (ama meelaha kale ee Koonfurta Ameerika?) Miyaa sidan loo isticmaalaa? Ujeedada waa la qadarinayaa, ilaa aysan jirin weedho sida: Hoygan hamygos k tal stan? (Mys hojos ahhhh)
xD, si loo habeeyo ficillada maya, si loo isku daro, mea culpa
Qaabkaan qaaska ah ee loogu hadlo waxaa sabab u ah ifafaalaha Voseus.Waxaa loo isticmaalaa dalal dhowr ah waana ku kala duwan yahay mid kasta oo ka mid ah inuu dhaho "waad awoodaa"
Maaha markii ugu horeysay ee aan helo faallooyinka noocan oo kale ah mana rumaysan karo jahliga weyn ee ka jira mawduuca, gaar ahaan Spain.
"Voseo" waxaa laga isticmaalaa dalal badan oo dhaca Koonfurta Ameerika (Arjantiin, Uruguay, iwm) waxaana aqbaliya Akadeemiyadda Boqortooyada Isbaanishka.
Waxaan kaaga tagayaa xiriiriye waxbarasho oo aad u wanaagsan:
Ha ku khaldin "voseo" iyo "lunfardo."
Sikastaba, taasi maahan sida aad adigu u muujiso, macnaheedu maahan inay qaldan tahay, sax? Waxay u egtahay in la yiraahdo Burtuqiiska reer Burtuqiiska waa khalad maxaa yeelay ma ahan sida ay ku hadlaan Boortaqiiska.
Aad baad ugu mahadsan tihiin labadiinaba jawaabihiina!
Isbaanishka gabi ahaanba waxaa jira jahli ku saabsan mowduucan.
Ma aanan ogeyn inay aqbashay RAE, waligaa sariirta ma aadi doontid adigoon wax cusub ogeyn.
Waa maxay lunfardo? Jaahilnimadayda iga raali noqo.
Waxaan moodayay inay khalad tahay xitaa hadii la isticmaalay, raali ahaw, ujeedkeygu ma aheyn sida aad ka arki karto faaladayda inaan dhaleeceeyo ama noqdo "troll"
Halkan Isbaanishka wuxuu ku saabsan yahay "adiga" iyo inaad la hadasho dadka da'da ah ama ixtiraamka leh ee ay kaa sheegaan adiga. Qaabkayaga aan ugu hadalno adoo adeegsanaya magac u yaalka "adiga" waa sida qofka saddexaad (asaga / iyada).
Habeyn kale labadeenna hug
Lunfardo waa qaab "aan aqoon lahayn" oo loogu hadlo, si loo yiraahdo.
"Voseo", dhanka kale, wax shaqo ah kuma lahan lunfardo waxaana loo adeegsadaa si guud (wadamadaas). Waxyaabaha kale, waxaa ka mid ah adeegsiga «vos» halkii laga bixin lahaa «tú», iyada oo wax ka beddelka ku yimaadda isku xidhka falka: waxaan dhahnaa «vos caminás», halkii laga dhigi lahaa «tú caminas».
Sidoo kale, Argentina (iyo Laatiin Ameerika guud ahaan) "adiga" looma isticmaalo sidoo kale, laakiin "adiga": halkii "waad socon lahayd," waxaan dhahnaa "waad socotaa."
Maracaibo, Venezuela sidoo kale "vocea" ama "vosea" (durba way i wareereen 🙂) Iyo Cali, Kolombiya sidoo kale, inkasta oo ay wax ka duwan yihiin. Waxaan u maleynayaa inay mid ugu yeeraan "hadal" kan kalena "magaceed" laakiin si daacadnimo ah uma ogi farqiga rasmiga iyo aqoonta u dhexeeya labada; Kaliya waxaan ogahay inay wax yar ka duwan yihiin. Marka, waad aragtay, waa wax aad u baahsan. Waxa ugu fiican maahan in loo arko wax xun laakiin waa kala duwanaansho kobcinaya luuqadeena cajiibka ah. Ka labaad ee ugu ballaaran adduunka looga hadlo (Mandarin ka dib) iyo Ingiriis ka sarreeya (sida ku cad Wikipedia).
Waxaan sidoo kale u adeegsanaa Paraguay.
Waxay sidoo kale had iyo jeer ii qaadaan Argentine markaan qoro habkaas.
Iyo waxa ay tahay inaan iska joojiyo inaan ku qoro afkayga hooyo, Guaraní.
Maxaa ku jira Isbaanishka: Mahadsanid lamaanaha / saaxiib, boostada.
si fiican ayaa loo yiri Pablo waa jawaabta ugu fiican adduunka. Haddii kale, waa salaan adduunyada haha
Ogow adduunku kuma dhammaado Isbaanish. Fahmay? is ogeysii ragga! kaliya waxaan dhihi karaa!
˙ǝʇuǝɯɐʇɔǝɹɹoɔ ɹıqıɹɔsǝ ɐ ɐzuǝıɯoɔ ǝʇuǝƃ ɐl zǝʌ ɐuǝnq ɐun ǝp ıs ɹǝʌ ∀ odsod lǝ lɐıuǝ פ
Laakiin dhab ahaan, qoraal sidan oo kale ah ayaa loo baahday. Khaladaad higaadin aad u tiro badan, kuma koobna oo kaliya qoraalada laakiin faallooyinka. Waad daalaysaa.
Way iga maqan tahay, waxaan u malaynayaa, "haddaanay ahayn" iyo "laakiin" in dadku si aan kala sooc lahayn u isweydaarsadaan (adiga maahan aniga laakiin aniga / haddii aadan ii sheegin, ma aqaan) iyo "lahaa" taas oo keliya ansax noqonaysa waxay badaleysaa waxay lahayd (waxay ahayd inay -> waxay ahayd inay yeeshaan) laakiin dadku waxay u adeegsadaan jamac (oo aan jirin) ee falka «in la helo» (waxaa jiray geeri badan -> waxaa jiray geeri badan)
Waad saxantahay! Wax ku biirinta aadka u wanaagsan… kuwaa sidoo kale waa wax aad u badan.
ostia, abaalmarinta jagada ugu xun sanadka sanadka hahaha
Haha! Weyn Waan jeclaa. 🙂
Muddo intee le'eg ayaad ahayd inaad taas qorto?
Waxa ay igu qaadatay google boggee sameeyay 😉
Cajiib ah. Waxaan rajaynayaa in hubiyaha luuqadu sidoo kale waxtar yeelan karo marka aad wax ku qoraysid madaxaaga.
Marka hore waad salaaman tihiin dhamaan bulshada. Waxaan rabaa inaan cadeeyo inaysan ujeedkeygu aheyn inaan abuuro khilaaf, dhab ahaantii waxaan u arkaa qoraalkan noocan ah mid weyn, laakiin waxaan u arkaa inay tahay wax is khilaafsan in hubinta higaada aysan waxtar u aheyn tusaalooyinka aad soo bandhigtay.
Ku jawaab jidi
Waa run. Kama aanan fikirin.
Sikastaba, taasi waxay kaliya qiimeyneysaa qeybta ugu dambeysa ee boostada (sidaa darteed qaarbaa dhaleeceeyay).
Waxaan si buuxda ugu raacsanahay qoraaga maqaalkan. Haddii qof yiraahdo waxaan rabaa in laga caawiyo madal kasta oo uusan si sax ah wax u qorin, way adag tahay in la caawiyo. Waxaa jira dad, nasiib daro, ama sababa kasta ha noqotee, aan fursad u helin inay kaqeyb galaan fasalka oo ay si bayaan ah u qoraan si xun. Laakiin tan runta ah ee qosolka badan ayaa ah inaysan rabin inay isku dayaan inay sameeyaan qoraal cad oo la fahmi karo. Dabcan, waxa muhiimka ahi waa inaad naftaada fahamsiiso, laakiin mararka qaarkood waan aqrin karaa qoraallo aan hal jajab ama xilli lagu qorin qoraal aan dhammaad lahayn. Marka laba qof oo isku dayaya inay wada hadlaan aaney ku hadleynin hal luuqad, jilista ama tilmaamtu aad ayey muhiim u yihiin, laakiin dhexdhexaad sida internetka ah waa mamnuuc. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in wax loo qoro, anigu si sax ah uma dhihi karo, laakiin ugu yaraan si dhexdhexaad ah ayaan u sheegayaa, maadaama aan dhammaanteen ka wada faa'iideysan doonno tan. Waan ka xumahay haddii qof uu xanaaqay, laakiin taasi ujeedkeyga ma ahayn.
Oo waa kan dahabka aniga iga.
Mudanayaal, ma jirtaa dhibaato in Pablo ama qof kale (ahem, aniga tusaale ahaan) uu doonayo inuu kaga tago fariin maldahan waxa uu qorayo? Uma maleynayo.
Ma ogeyd sida ay u xanuun badan tahay in la saxo naxdinta higaadda ee dad badan oo raba inay wax dhajiyaan? Mise ka sii darane, akhri faallooyinka dhowr isticmaale oo u muuqda inay wax ku qorayaan badhida? Wax walba aniga ayey ii tagayaan halkan, ma ahan inaan difaaco Pablo, laakiin sababtoo ah awoodda lagu gaaro heerarka nacasnimada ka sarreysa 9000, nacalad ha ku dhacdo.
Marka hore dhowr dab-damiye oo ka faallooda voseo, taas oo ah wax si caadi ah u caadi ah, waxay ku socdaan qaab sida foosha ee gringos ku sameeyo Ingiriisiga, waad ogtahay, «waan ahay, waan ahay» ... waad awoodi kartaa, waad awoodi kartaa, waad awooddaa. Xaqiiqdii ma noqon kartaa bahal noloshan oo kale ah oo doonaya inaad dhaleecayso arrimaha noocan ah? Ninku wuxuu dhahayaa way fiicnaan laheyd qof walba, oo uu isagu kujiro, afar wiil ayaa kasoo baxa "la xanaaqay" maxaa yeelay waxay u maleynayaan in jaahil loo sheegay. Hagaag, mudane, waxaan aad uga shakisanahay in ujeedka qoraalka Pablo ay tahay inaan kuugu sheego jaahil, laakiin waxaan aad ugu qanacsanahay inaad jilicineyso jahligaaga adoo dareemaya in laguu sheegayo wax aan kula jirin, sida qofka halkan ku dhahaya «yaa kama baqayo.
Ma laga xumaaday? Caano xun! Uma arko rabitaanka ama ujeedka inaan halkan ku gafno, ka tag dareenka, in wax kasta oo hadda la daabacay, qayb wanaagsan, badiyaa ay tahay "caay", fadlan, ku filan xad dhaafka noocaas ah.
In ka badan + 9000!
Tani waxay i xasuusineysaa qoraal in aan helay waqti hore oo aan aad u qosol xD
Wanaagsan, waan bixiyay waana hadii ay shaqeyso ee
Haa haa? ¬¬
Chromium-kayga, ikhtiyaarkaas durba aniga ayaa iigu yimid asal ahaan.
Mawduuc Ka Baxsan: Hadda waxay hagaajiyeen dhibaatada bixinta bogagga shabakadda ee Debian Chromium.
Noocee ayaad u cusbooneysiisay Chromium?
Qoraal aad u wanaagsan oo aad u dhameystiran. Gaar ahaan sababta oo ah liiska khaladaadka higgaadinta ee soo noqnoqda (ama naxdin). Inay jiraan dad badan oo aad ugu kalsoon kalsoonida akhrinta una malaynaya inay wax u qorayaan "si sax ah" iyagoo adeegsanaya.
Oo maadama aad tan kujirto, sidee wax uqortaa hurdo ama hurdo ?????? fadlan hadaad naxariis badantahay ii sharax
Ku jawaab stebsan
Waan ka war la’aa "sababta" iyo "sababta": O
sideen u kicin karaa higaada saxda ah ee kumbuyuutarkeyga PC –– iyo maxaa
Casharrada cajiibka ah! Waxaan kuugu mahadnaqayaa inaad waqti siisay inaad qabato oo aad daabacdo; wax badan ayey ii adeegtaa.
waad aragtaa, waxaan dhibaato ku qabaa tan kuwa wax hagaajiya ee ku jira kiniinka…. nasiib daro anigu wax fikir ah kama haysto sidaan mid u suurta galin lahaa. Waxaan isku dayay inaan kala soo baxo waxyaabo ku saabsan firefox laakiin wali si sax ah uma shaqeeyaan.
Aad baan u qadarin lahaa haddii aad halkan iga caawin kartid intii suurtagal ah
Waxaad horey u taqaanay dhamaan Yapas laakiin marwalba waxaa jira qof jaahil ah oo sameeya khaladaadka ugu badan ee aan caadiga ahayn sida salaanta oo aan lahayn h iyo waxyaabo kale oo naxdin leh waligey ma noqonin qof waalan oo higaad iyo lahjad ah laakiin si kasta oo doqon nimo ah uma sameyn kartid qaladaadkaas OMG D: sida yapa lambar 1
Faallo aad u wanaagsan. Inaad si wanaagsan wax u qorto wax lacag ah kuma fadhiyaan ... Haddii wadankaagu uusan lahayn nidaam waxbarasho oo wanaagsan, waxaa fiican inaad kaligaa wax barato ... Way yara xishoonaysaa dadka kale inay arkaan qoraalo gaar ah ... qaladaad buuxa ... sanad ka badan, hadaad xiisaynayso, waxaad si fiican u baran kartaa luuqada aad isticmaasho oo kaliya waxaa lagama maarmaan ah inaad xamaasad u yeelatid qaab dhismeedkiisa, asalkiisa, isticmaalkeeda ... waxay ugu dhawaaqaan sida reer Caaliya, hadana si wanaagsan ayey u qoraan .. .
Tan waxaa kuu sheegaya qof labo luqadood u qora si qumman; hab iskiis wax u baray ...
Ku jawaab Joanot
WOW aad baad u mahadsan tahay wax badan (=
Jawaab Gabriela Ramirez
Marwo li dijo
Mahadsanid!!!!!! Sharaxaadaadu wax badan ayey i caawisay !!! Farxad !!!!!! 🙂
Ku jawaab Lady Li
Waad ku mahadsantahay kaalmadaada, guulahaaga.
Jawaab Dixon Scola
Sida loo xakameeyo muusigeyga muusiga ee garoonka